Great Atụmatụ na otú usoro Disk on Mac / Windows PC na bara uru Software d
Ọ bụrụ na ị mkpa Ọkpụkpọ gị disk na gị Mac ma ọ bụ Windows PC, nke a bụ nri ebe ị na-aga. Nzọụkwụ maka otú Ọkpụkpọ disk on Mac na Windows PC na-kpuchie ebe a. Na ihe bụ ihe ọzọ, ị nwekwara ike gbalịa software kwuru ebe a. Lelee nkọwa maka akụkụ nke ọ bụla:
Part1: Gịnị bụ disk formatting?
Part 2: Olee Ọkpụkpọ Disk on Computer
Olee otú usoro Disk na Windows 7
Olee otú usoro Disk na Mac OS X
Olee otú usoro Disk na Linux
Part 3. Bara Uru software maka disk formatting
Part 1. Gịnị bụ disk formatting?
Nnoo, site disk / mbanye formatting anyị pụtara usoro nkwadebe a ụfọdụ nkebi nke mbanye na-eji site na kọmputa na Operation System (os) maka ihichapụ echekwara data na iji na ohere maka mwube a ọhụrụ faịlụ usoro. (Link aga na isiokwu) Nke a usoro dị oké mkpa dị ka ọ na-enye ohere kọmputa gị na-aghọta a ọhụrụ ike / flash mbanye, nke e mesịa ga-eji na data nchekwa. Formatting enyere gị os na-agụ mbanye si ndekọ Ọdịdị, akọwapụta ụzọ ọmụma na-haziri na disk.In omume, disk formatting bụ mma nke ukwuu ahụ dị ka ihichapụ niile data si HDD, otú ọ dị mkpa ịrụ a na ime naanị na ide disks ma ọ bụ nkwado ndabere na mpaghara niile ọmụma bara oké uru n'ihu ọrụ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na-keihuojoo ezuru Ọkpụkpọ a disk, nke e dere ihe dị mkpa, e nwere ka a ohere iji nweta na ozi azụ, dị ka eziokwu na data ka na echekwara na HDD, ma dị nnọọ adịghị egosi na ndekọ na Ọdịdị. E nwere ọtụtụ ihe bara uru utilities ịrụ a ọrụ, n'ihi na ihe atụ 'Data Recovery' site Wondershare ma ọ bụ 'Norton Disk Warrior'.
Part 2. Olee Ọkpụkpọ Disk on Computer
Otú ọ dị, usoro dịgasị ma ọ bụrụ na ị na-eji dị iche iche os. Ke ibuotikọ emi anyị ga-agwa gị otú ị Ọkpụkpọ gị mbanye na Windows 7, Mac OS X na Ubuntu.
Daalụ maka Microsoft, ụgbọala formatting on Windows 7 bụ kama mfe. Nnọọ na-eso a ndu nzọụkwụ site nzọụkwụ na-enweghị nsogbu kwesịrị egosi.
Firstly, ị kwesịrị ị na-emeghe Disk Management ngwá ọrụ, nke na-enyere jikwaa draịva on Windows. Ihe kacha ụzọ chọta na ọ bụ site na iji kọmputa ede diskmgmt.msc na search mmanya.
Mgbe Disk Management emepe (pụrụ sekọnd ole na ole), họrọ mbanye na ị chọrọ Ọkpụkpọ na ndepụta. (Anyị na atụ anyị na-ahọrọ mbanye Music (E))
Ugbu a nri-pịa na họọrọ mbanye ma họrọ Format (jide n'aka na ọ bụ ihe ziri ezi mbanye!)
Ugbu a ọ bụ oge inye aha ọhụrụ ka mbanye. Na anyị atụ anyị aha ya - Videos (ma ọ bụrụ na ị na-mbụ aha nke mbanye - ọ dịghị mkpa).
Ọzọ, anyị na-ahọrọ anyị faịlụ usoro. Ndị kasị mma na otu onye bụ NTFS, otú anyị na-ahọrọ ya. (More na faịlụ usoro i nwere ike ịgụ ebe a).
Mgbe na anyị kwesịrị ịhọrọ oke Unit Size. Anyị kwesịrị ịhọrọ Ndi an-kpọ, dị ka otú ahụ ndị kasị mma size ga-họọrọ Windows.
Ugbu a anyị nwere abụọ nhọrọ: ma na-ahapụ a akọrọ na igbe na-esote Igosi a Quick Format ma ọ bụ iji uncheck ya. Anyị na-akwado uncheck ya, dị ka otú ahụ gị os ga-elele mbanye maka niile kwere omume njehie na tufuo ha. Otú ọ dị, ọ pụrụ-ewe oge. (Site ndabere Windows ga-a akọrọ na igbe, ya mere kpachara anya).
Ikpeazụ igbe - Kwado File na nchekwa mkpakọ na-achịkwaghị achịkwa ndabara, Ya mere ka arapara ya.
Nyochaa niile họọrọ ntọala na pịa OK.
The ịdọ aka ná ntị ozi ga-apụta, dị nnọọ pịa OK.
Fọrọ nke nta n'ebe ahụ! Ugbu a-echere gị họọrọ disk ka usoro. Get a iko tii ma ọ bụ ihe, dị ka ọ pụrụ a mgbe.
Mgbe ọ na-esịmde ka 100%, jide n'aka na ọnọdụ edepụtara dị Healthy, dị nnọọ ka gị niile ndị ọzọ draịva.
Ekele! Na ị dị nnọọ formatted gị na mbụ mbanye! Ugbu a ọ bụ njikere maka ojiji.
Tupu ịmalite anyị nkuzi, ọ dị mkpa banyere na n'adịghị Windows, Mac OS X bụ ọtụtụ ihe ndị ọzọ anụ usoro na ọ dịghị mkpa na Ọkpụkpọ gị mbanye otu ugboro n'afọ ma ọ bụ otú iji reinstall sistemụ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị chọrọ Ọkpụkpọ gị Mac mbanye n'ihi ihe ụfọdụ (ere ngwaọrụ gị ma ọ bụ nanị ịlụ Bibie niile software na aga data na-amalite ọzọ site ọkọ), nke a nkuzi ga-bara uru maka gị.
IHE: Jide n'aka na ị kwadoo gị data n'ọdịnihu ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịnọgide ya, dị ka ị ga-enwe ike iji nweta ya azụ mfe ma ọ bụrụ na ị na mberede gbanwee obi gị. Ọ bụrụ na ị na-ama furu efu ụfọdụ ozi, e nwere ụfọdụ software nke nwere ike inyere aka, n'ihi na ihe atụ: 'Data Recovery' n'ihi na Mac site Wondershare ma ọ bụ ụfọdụ ndị ọzọ.
Nke mbụ niile, anyị mkpa ẹkedori OS X Utilities. The otú anyị na-eme na dịgasị, dabere na version nke OS X ị na-eji.
N'ihi na 10.7 Odum, 10,8 Mountain & 10,9 Mavericks mkpa ka ị jide Wụk na R igodo n'out oge, dị nnọọ ka ị na-amalite gị os X. Mgbe ejide ha 10-15 sekọnd, os X Utilities nhọrọ ga-egosi na gị na ihuenyo.
N'ihi na ihe niile nsụgharị tupu na gụnyere OS X 10.6 Snow agụ owuru, ị ga-mkpa ndị isi awọ OS X echichi DVD (Ẹnam ekese na gị Mac kọmputa) ma ọ bụ mkpọsa DVD nke gị os X version.
Maka ihe ọ bụla nsụgharị tupu na gụnyere Snow agụ owuru, fanye kwesịrị ekwesị DVD ozugbo pịa ma jide C isi, dị nnọọ mgbe ị na-anụ mmalite-elu music. Kọmputa gị ga-amalite iji echichi software.
Ke os X Utility igbe họrọ Disk Utility.
IHE: Ọ bụrụ na ị nwere ihe karịrị otu nkebi na draịvụ ike, i nwere ike iji wepụ ndị a na-alaghachi na draịvụ ike na otu nkebi, mbụ.
Ugbu a họrọ draịvụ ike gị ele ihe nhọrọ. Mgbe na pịa nkebi bọtịnụ.
Họrọ 1 nkebi.
Na nkebi Ozi igbe dee aha ọhụrụ gị ike mbanye. (Macintosh HD anyị atụ). Pịa Mee e mesịa.
Mgbe ahụ, pịa nkebi bụrụ na ị bụ obi ụtọ na ntọala niile.
Na Disk Utility họrọ nkebi nke e dị nnọọ kere. (Top hapụrụ igbe). Ugbu a họrọ ihichapu na ego na format bụ Mac OS Extended (Journaled). (Ga-họọrọ na ndabara)
Ugbu a ị chọrọ ịhọrọ otú ala na ị chọrọ OS X ịrụ ọrụ. The ahia-anya bụ oge, n'ihi ya, ndị kasị ala nhọrọ, ma ọ nwere ike na-oge ụfọdụ. Otú ọ dị, na nke a ị na-ekwe nkwa na ọ dịghị onye ga-enwe ike iji weghachi gị ụbọchị ma ọ bụrụ na-ịchọrọ ị na-ere ngwaọrụ mgbe gụchara na formatting usoro. Mgbe ị na-ahọrọ ọ na-, pịa OK. Ugbu a pịa ihichapu.
Mgbe gị disk mbanye formats ịga nke ọma, e nwere ihe ole na ole nhọrọ ịhọrọ site na: Weghachi si a Time Machine ndabere ma ọ bụ reinstall OS X. bụrụ na ị chọrọ weghachi gị mbanye si ọhụrụ ndabere - họrọ mbụ nhọrọ. Nke abụọ nhọrọ ga-ekwe ka ị wụnye afresh OS X.
Ọ bụrụ na ị bụ onye na mpako ọrụ nke Ubuntu, ma ị ka na-amaghị otú Ọkpụkpọ disk mbanye, anyị ga-n'ezie ikwu na ị na-atụle ị na-ahọrọ ọzọ OS maka ọdịnihu ojiji. Nah, dị nnọọ egwu egwu, ọbụna n'ihi na ị anyị kwadebere a obere ndu nke kwesịrị-enye aka.
1. Mbụ niile, ị chọrọ nwụnye a nkebi njikwa gparted. Iji na-eme nke ahụ, nanị pịnye 'sudo apt-na-wụnye gparted' na ọnụ
Mgbe wụnye ya, i kwesịrị-agba ya. Ụdị 'sudo gparted'.
Ugbu a, họrọ mbanye na ị chọrọ Ọkpụkpọ na ndepụta
Ego ntọala niile ma hụ na ị na-ahọrọ nri mbanye!
Press Mee button na-eche
Ọma! Na ị dị nnọọ formatted gị mbanye!
Anyị na-eme na-aghọta na mgbe ụfọdụ usoro nke formatting pụrụ ịbụ nnọọ ihe siri ike na ọ dịghị onye chọrọ n'ihe ize ndụ adịkwa niile data bụrụ na ihe na-aga na-ezighị ezi. Ya mere, anyị hụrụ na a ole na ole bara uru software nke nwere ike igosi na formatting usoro maka ị.
Aha: HDD Low Ọkwa Format Ngwá Ọrụ
Mmemme re-initializes na draịvụ ike site na ekewetde a efu byte ka ọ bụla ọnọdụ na disk. Na omume, ya n'ụzọ zuru ezu na irreversibly erases gị disk-ewepụ ihe niile na-emerụ ma ọ bụ nje data na ya. The interface bụ nnọọ mfe ma ọ dịghị achọ ihe ọ bụla gara aga ihe ọmụma. Ọ na-arụ ọrụ na ọtụtụ ngwaọrụ, gụnyere flashcards. Ezie na ọ pụrụ ewe oge n'ihi na gị mbanye ina formatted, ị pụrụ ijide n'aka na ọ ga-adị ọcha na virus / ire ure free.
Aha: AOMEI nkebi nnyemaaka
Mmepụta: AOMEI Technology
Ahịa: Naanị ọkọlọtọ Edition bụ free
AOMEI nkebi nnyemaaka Standard na-enyere aka ịchịkwa draịvụ ike gị na nkebi. Ka ihe atụ: enyere ntọt nkebi size, jikwaa disk size. Ọ na-eji oru-larịị data nchebe technology, nke na-eme ya otu ezigbo software ọ bụrụ na ị chọrọ na-ere ị na ụgbọala e mesịa. Ma na-arụ ọrụ MBR na GPT disk ekwekọghị; mbanye si size dịghị mkpa ma - ọ na-eje ozi ya na nzube dokwara ọma na obere na nnukwu disks (karịa 2TB).
Mmepụta: Coriolis Systems
nyiwe: Mac OS X (10.6 na ndị okenye)
Kensinammuo, ma dị ike ọrụ interface-enyere gị aka mfe ike, ime, resize ma ọ bụ usoro partitions na họọrọ ike disks (esịtidem, mpụga, ofu ma ọ bụ mbughari). Ke adianade do, ọ na-ekwe ka kwụ n'ahịrị ọtụtụ arụmọrụ-rụrụ na a kpọmkwem iji. E nwekwara a mma nke na-enyere ihe omume na-akpaghị aka megharia gị partitions iji maka OS X na-arụ ọrụ ndị ọzọ rụọ ọrụ nke ọma.
> Resource> Utility> Top Atụmatụ na otú Ọkpụkpọ gị Disk